Ny Steroids Strongest Oral Methasterone (Superdrol) Prohormone
/Blog/Methasterone (Superdrol)/Ny Steroids Strongest Oral Methasterone (Superdrol) Prohormone
Posted on 03 / 24 / 2019 by Dr. Patrick Young nanoratra tao Methasterone (Superdrol).
1. Inona moa i Methasterone (Superderol)? 2. Inona avy ny vokatra mitovitovy amin'ny môterona?
3. Methasterone Half Life 4. Fomba fijerin'ny methasterone
5. Fampiasa amin'ny fitsaboana Methasterone 6. Ny soa entin'ny kanseran'ny Methasterone
9. Methasterone Cycle sy Methasterone Dosage 10. Resultaterin'ny Methasterone
11. Ny fiantraikan'ny Methasterone 12. Mena ho an'ny varotra
Inona moa i Methasterone (Superderol)?
Amin'ny teny tsotra, ny Methasterlone, fantatra amin'ny anarana hoe methyldrostanolone, dia amidy indrindra eo ambanin'ny marika Superdrol, dia iray amin'ireo mahery indrindra indrindra amin'ny steroid anabolic-androgenic steroid (oral-active)AAS). Ity steroid ity dia malaza amin'ny atleta, bodybuilders, ary ireo miezaka manangana masiriry hozatra. Raha toa ianao ka mahatsikaritra ity zava-mahadomelina ity amin'izao fotoana izao, dia jereo ny famerenana ny antsipirian'ny Methasterone izay hilaza aminao izay rehetra ilainao hahafantarana azy.
Ireo toetra simika ireo dia:
Anarana simika Methasterone: UNII-GH88DY98MR
Anarana hafa: methyldrostanolone
Molecular Mofo: 318.501 g / mol
Hafatra mamirapiratra: 223-2250C
Toerana mahandro: 423.80C
Fiainana lava: ora 8
Ny tantaran'ny Methasterone vovoka dia niverina tamin'ny 1956, rehefa hita nandritra ny fikarohana iray nataon'ny orinasa mpanamboatra fanafody, ny Syntex Corporation. Ny tanjon'ity fikarohana ity dia ny hitady vovoka misy fananganana fananganana antibiotika izay afaka manampy amin'ny homamiadan'ny ady. Tamin'ny fotoana nitadiavan'izy ireo hetsi-panoherana miady amin'ny homamiadana no nirodanan'ny mpikaroka ny Methasterone (Superdrol).
Raha toa ny Methasterone (superdrol) dia tsy naneho karazana fanoherana maro, dia hita fa ny fananana dia nanana toetra tsara hafa. Tamin'ny fitsapana taty aoriana, dia hita fa ny Methasterone (superderol) dia nanana ny bioavailability of methyltestosterone, raha ny 20 isan-jato kosa dia androgenic sy 400% ho anabolika, izay manome ny anabolika ho an'ny androgenic ratio (fantatra koa amin'ny Q-ratio) an'ny 20.
Na dia hita tany amin'ny 1950 aza i Methasterone (superderol), dia tsy azon'ny mpivarotra mihitsy izany ho an'ny dokotera. Tsy nisy naheno izany raha tsy tamin'ny 2005, raha nisy liana iray hafa nahita ny fitantanana dia nanambara fa ny Methasterone (superderol) dia mionona kokoa noho ny androgenic. Ity vaovao ity dia tena nilaina tokoa ny fiasan'ny fambolena raha ny filazany fa ny toetran'ny rongony dia mihoatra lavitra noho ny habetsahana izay mety hisy fiantraikany amin'ny hormones ao amin'ny vatana.
Inona avy ny vokatra mitovitovy amin'ny môterona?
Superdrol no ampiana fantatra tsara miaraka amin'ny vovony Methasterone. Ny vokatra dia nametraka ny tobin'ny orinasa lehibe fanampiny ao 2005. Teo ambanin'ny anarana hoe Superdrol, dia nivarotra azy ho fanafody amin'ny sakafo na prohormone ary nahafinaritra ny fahombiazany. Tao amin'ny 2006, ny vokatra dia nahasarika ny fisainan'ny FDA ary najanona izany.
Na dia norarana aza i Superdrol, dia nitohy nitety ny tsena ny mainty mainty sy ny Metstarone. Ao amin'ny 2012, nampidirina amin'ny lisitry ny tsiranoka US sy ny World Anti-Doping Agency (WADA) ny zava-mahadomelina. Ankoatra izany, ny Superdrol dia nohamarinina ho toy ny Drafitra III ny vontoaty toy ny an'ny hafa AAS.
Androany, Methasterone, izay manana tarehimarika CAS 3381-88-2, dia mbola ampiasaina betsaka amin'ny seho bozaka ary maro no mihevitra azy io ho iray amin'ny steroïde mahery indrindra azo ampiasaina. Mbola hitanao eny an-tsena ny Methasterone, Superdrol, na Methyldrostanolone.
Misy koa ny fiovan'ny Superdrol fantatra amin'ny hoe Dymethazine. Na dia manana ny toetra mitovy amin'ny Superdrol aza izy, dia ara-dalàna avokoa ny Dymethazine ao Etazonia. Ny vokatra hafa izay ahitana ny vovony Methasterone dia ny Superdron, SD Extreme, Beastrdol, Phreak, ary Maxdrol.
Methasterone ny antsasaky ny fiainana manodidina ny ora 8
Fomba fijerin'ny methasterone
Araka ny angon-drakitra sasantsasany, ny vanim-potoan'ny famantaran'ny metasterone dia matetika no avy amin'ny telo andro ka hatramin'ny 10 andro.
Fampiasa amin'ny fitsaboana Methasterone
Ny Methasterone (superderol) dia tsy nividy ara-pahasalamana mihitsy. Midika izany fa tsy mbola nisy dokotera mihitsy. Na izany aza, ny steroid Methèroone dia amidy indrindra amin'ny fanampiana ny sakafo fanampiny.
Ao amin'ny sasany amin'ireo fandinihana momba an'i Methasterone, naseho io steroid io mba hanatsarana ny mahasoa ny ankamaroan'ny olona. Azo inoana fa hanatsara ny modely amin'ny torimaso ny olona iray ary hanomezana fahatokisana ny mpampiasa. Ankoatra izany, ny fampiasana an'i Methasterone dia mifandray amin'ny fahatsapana fahasambarana sy ny fomba fijery ankapobeny amin'ny fiainana.
Ny soa entin'ny kanseran'ny Methasterone
Mety manontany tena ianao - inona no ataon'i Methasterone? Voalohany indrindra, mampitombo ny haavon'ny angovoo izany, izay mamela anao hanana fotoam-pivoarana mahomby kokoa. Faharoa, manome hery ho anao izy io, mamela anao hampiakatra lanja mahery. Fahatelo, mampitombo ny fiaretanao izany, ka mamela anao hiaritra ny fiasan 'ny fiasana mafy mandritra ny fotoana maharitra. Tena mahavariana ny fiantraikan'ny Methasterone, miaraka amin'ny haavon'ny angovo avo, ny tanjaka ary ny fiaretana maharitra, hiaina Misaotra an'i Methasterone toy ny:
Ny kanseran'ny Methasterone dia miteraka fitomboan'ny lanjan'ny muscle. Afaka hahatratra hatramin'ny 10 lbs (na mihoatra) ao amin'ny voan'ny diabeta madio ianao ao anatin'ny efa-bolana eo ho eo. Na dia vaovao tsara aza dia ity steroide anabolic ity dia manana fihenam-bidy tena ambany ho an'ny estrogen ary tsy misy ny lanja izay azonao dia lanjan'ny rano. Ny habetsaky ny lany azo dia masira maina, afaka maharitra ela izy io.
Tsy mahagaga, ny fampiharana dia fomba tsara handosirana ny tavy mavesatra sy ny hahazoana muscle sasany, fa ny fampidirana Methasterone steroid amin'ny fampisehoana fitarainana dia manova ny fahasamihafana rehetra. Satria ny steroid Methèreone dia manome fahafahana anao hiaritra fampihetseham-po mahery vaika, dia ho afaka mandoro kaloria bebe kokoa ianao mandritra ny fotoam-pivoriana. Ankoatra izany, ity medikaly ity dia afaka manampy anao hifikitra amin'ny sakafo tsy misy kaloria ary mbola manampy anao hampitombo ny lanjanao. Miaraka amin'io vokatra io, dia azo atao ny mahazo tombony ho an'ny hozatra sy very lanja indray miaraka.
Azo ampiasaina amin'ny fiterahana ny Methasterone (superderol). Izany dia satria misy proteinina be dia be ary manatsara ny famokarana sela izay ahafahanao manangana hareza mafy. Ny kininina Methasterone dia afaka vita ao anatin'ny dimy herinandro monja. Ao anatin'ny iray volana monja, afaka manantena hahazo tombony 8-10 ianao.
Azo atao ihany koa ny mampiasa methasterone (superderol) mba hikapohana azy. Izany dia satria mandoro ny tavy maina avy amin'ny vatany izany. Ankoatra izany, mampihetsi-po ny vatan'ny metabolisma izy io, izay manasaraka ny poizina manimba avy amin'ny vatanao. Amin'ny fampiasanao vola kely amin'ny kanseran'ny Methasterone, azonao atao ny mahatratra vatana sy vatana mangatsiaka rehefa mandeha ny fotoana. Ho an'ny vokatra tsara indrindra, dia zava-dehibe ny hanatontosanao tsy tapaka rehefa manohy amin'ny Cyber ​​Methasterone ianao.
Ny tombontsoa hafa an'ny Methasterone dia ny:
5. Mihetsika haingana izany
Zavatra iray momba ny Methasterone izay mahavariana ny mpamboly, ny atleta ary ny mpankafy fialan-tsasatra dia ny natiora haingam-pandeha. Ny famintinana ny metasterone ao amin'ny vatana dia haingana kokoa noho ny fanafody hafa. Ao anatin'ny herinandro 4 fotsiny dia afaka mahazo na aiza na aiza amin'ny 8 ka hatramin'ny 10 pounds ny leven muscle. Tena mahavariana izany, amin'ny filazàna fa matetika dia mitaky volana maromaro ho an'ny mpampiasa izany mba hahatratrarana ny valiny.
6. Misy dingana fohy
Raha efa manana herinandro 5 fotsiny ny kanseran'ny Methasterone, dia afaka manatanteraka ny Cycle Metasterone ianao mandritra ny herinandro 3. Midika izany fa afaka mandalo tsingerina maro ianao mandritra ny fotoana fohy. Ankoatr'izay, azonao atao ny manitatra ny fe-potoana fanarenana anao mba hampihenana ny fahasimbana eo amin'ny sehatry ny methasterone. Ny bisikileta fohy dia mahatonga an'i Methasterone safidy tsara ho anao manokana raha toa ianao ka mitady mpilalao baolina kitra ho an'ny mpitaingina bisikileta.
7. Malemy amin'ny aty izy
Ny zava-misy fa ny cyclone Methèroone dia mitoetra ho 3 hatramin'ny herinandro 5 dia midika fa ny atiny dia ho tratran'io steroide anabolika io mandritra ny fotoana fohy fotsiny. Izany dia hanome ny fotoana aterinao hahasitrana. Ny ankamaroan'ny olona nampiasa Methèroone steroide dia miteraka olana amin'ny aty amin'ny aty amin'ny fampiasana ny zava-mahadomelina, izay midika fa matanjaka kokoa raha oharina amin'ny steroids hafa.
Misy fanafody isan-karazany azonao alaina miaraka amin'ny steroid Methèroone mba hiarovana ny atin'akanao ary hitazona ny tsindrim-piainanao sy ny cholesterol ao anaty salan'isa. Mba hiarovana ny aty, tokony haka 2g ny tsilin'ny ronono isan'andro ianao mba hanampy amin'ny fanalana ala sy hamerenana ny sela ao amin'ny atiny.
Ho an'ny kôlesterôl ny fanohanana anao, dia omena anao haka 1.2 g amin'ny tsiranoka mena isan'andro ianao. Ataovy azo antoka ny mitondra ny 100 mg of CoQ10 isan'andro raha ny vary masaka mena dia mety hampidina ny haavon'ny CoQ10. Ho an'ny fanamafisana ny fiterahana, ataovy azo antoka ny fakana 2g ny voankazo lavenona isan'andro.
8. Tsy mampiroborobo ny fitehirizana rano
Ity no steroid mety tsara raha ampiasaina raha te hanana steroid be loatra izay afaka manampy anao handany lanjan'ny rano. Azonao atao ny mitondra ity fanafody ity miaraka amin'ny steroids mena mba hahazoana vokatra mahavariana. Ny fanafenanao azy amin'ny steroids moka koa dia hisakana anao tsy hitebiteby.
Dianabol, na Dbol tsotra fotsiny, dia fanafody anabolika sy androgenic izay manolotra fialamboly kely. Tahaka an'i Methasterone 3381-88-2, Dbol dia sokajiana zava-mahadomelina III. Misy fiantraikany lalina eo amin'ny fiovan'ny proteinina izany, ary mora foana ny mandeha amin'ny atiny.
Raha tokony hampiasaina ao amin'ny 20-30 mg ny kanseran'ny Methasterone mandritra ny herinandro 4 farafahakeliny, Dianabol dia ampiasaina tsara amin'ny dosie isan'andro amin'ny 20 mg isanandro noho ny tsy mihoatra ny herinandro 8. Izany no mahatonga an'i Dbol ho toy ny steroid ho an'ny bisikileta lava kokoa. Na izany aza, ny Methasterone (Superdrol) dia mitarika fiovana tsara kokoa ary mahatonga ny vatana kokoa ho sarotra kokoa sy kokoa noho ny amin'ny Dbol.
Zavatra iray hafa mampiavaka ny Superdrol sy Dianabol ny vidiny. Ny Superdrol dia misy amin'ny vidiny ambany raha oharina amin'ny Dianabol. Ankoatra ny tsy fahampian'ny vidim-piainana, ny tombony azo avy amin'ny Methasterone (Superdrol) dia maharitra kokoa noho ny amin'ny Dianabol, ka mahatonga azy io ho safidy tsara ho an'ny mpanao biriky sy atleta.
Tahaka an'i Methasterone (supderdrol), Anadrol koa dia heverina ho iray amin'ny steroids mahery indrindra. Miaraka amin'ny Anadrol, dia mitongilana ao anatin'ny fotoana fohy ny fandresen-dahatra mampihetsi-po sy hery. Matetika ny mpampiasa dia mahazo lanjan'ny lanjan'ny 10-15 ao anatin'ny herinandro 2 fotsiny.
Ny iray amin'ireo fahasamihafana lehibe eo amin'ny Methasterone sy Anadrol dia ny dosage. Raha ny dosage nomena ny Methasterone dia 20-30 mg isanandro, ny dosage ideal Anadrol dia 50-200 mg isan'andro. Midika izany fa mila mampiasa be lavitra noho ny Anadrol ianao.
Raha ampiasaiko voalohany ny Anadrol, dia voatery haka iray tabilao 50 mg ianao. Aorian'ny herinandro dia azonao ampiana fanafarana isan'andro ny takelaka roa, ny iray alaina amin'ny maraina ary ny iray amin'ny hariva. Ireo izay mandanja mihoatra ny 220 lbs dia afaka mampitombo ny dosage Anadrol amin'ny 150 mg isan'andro ao amin'ny 3rd herinandro. Tsara ny manamarika fa ny Anadrol dia mihazakazaka haingana ireo receptors, noho izany dia tsy tokony hihoatra ny herinandro 6 ny fitomboany.
Fiovana hafa prohormone Methasterone sy Anadrol dia ny fandrosoana amin'ny Superdrol no maharitra kokoa noho ny an'i Anadrol. Izany dia satria ny lanjany azo dia masira tanteraka tanteraka, ka mety haharitra ela.
Miaraka amin'ny Anadrol, na izany aza, ny fiorenam-bidy mampiavaka izay hita fa vetivety taorian'ny fihenana dia mihena haingana. Izany dia satria ny lanjany dia ny lanjan'ny rano, noho izany dia very haingana rehefa ajanona ny fampiasana ny zava-mahadomelina.
Mba hitazonana ny masin'ny muscle taorian'ny dingana Anadrol, dia tsara ny manohy ny fitsaboana amin'ny steroid amin'ny fanafody hafa steroid. Raha tsy manao izany ianao, dia hihena tsikelikely ny fihenan'ny vozon'ny aretin-kozatra ary hiverina amin'ny endrika taloha ianao. Raha ny marina, tsy misy steroid hafa anabolika sy androgenika mitarika toy ny fahaverezan'ny mafy sy ny herim-po tahaka ny nataon'i Anadrol.
Methasterone Cycle sy Methasterone Dosage
Ny ankamaroan'ny cyber metatra dia haharitra na efatra na enina herinandro. Raha vao manomboka ny famolavolana na ny famakiana ny Cystène Methasterone dia tsy tokony hihoatra ny 10mg isan'andro ianao mandritra ny herinandro voalohany. Ao amin'ny 2nd ary ny herinandro 3rd, azonao ampitomboina ny dosage isan'andro amin'ny 20mg.
Amin'ny herinandro fahaefatra, azonao atao ny mampitombo ny dosage amin'ny 30mg / andro ho an'ny vokatra tsara indrindra. Amin'ny herinandro 10 Cystèque Methasterone, dia asaina maka 250-500mg isan-kerinandro amin'ny Sustanon 250 mandritra ny folo herinandro. Ataovy azo antoka ny fampiharana tsy tapaka rehefa mandeha ny dianao.
Ny dosage mahasoa metasterone dia tabilao / tabilao 10mg nalaina tamin'ny maraina ary ny iray hafa nalaina tamin'ny hariva. Na dia mety haharitra hatramin'ny 40mg aza ireo mpampiasa za-draharaha, ireo izay tsy mbola nampiasa io steroid anabolic io dia tokony handamina azy amin'ny 10-20mg isan'andro.
(Mpanao voalohany) 4-6 herinandro
(Advanced) 4-6 herinandro
Ny Methasterone (superderol) dia fantatra amin'ny famoahana vokatra tsara. Ny ankamaroan'ny mpampiasa dia toa manangom-pihetseham-po amin'ny 10 eo ho eo mandritra ny efatra ka hatramin'ny enina herinandro. Ny fitambaran-javatra dia hita fa tsara noho ny fametrahana haingana haingana any amin'ny faritra samihafa amin'ny vatana, anisan'izany:
Ankoatry ny fanampiana anao hametraka ny masomboly, ny Methasterone (superdrol) dia mampitombo ny herinao lehibe. Ny ankamaroan'ny mpampiasa dia afaka manampy 50 kilao amin'ny fiakarany midadasika mandritra ny efa-bolana. Raha ampifandraisina amin'ny AAS hafa, ny Methasterone aloha sy aorian'ny valiny dia tsara kokoa.
Ny mpampiasa iray dia nandinika ny zava-mahadomelina ary nilaza hoe: "Mason-kintana 10mg isan'andro no miasa tsara mandritra ny enina herinandro, nahazo vokatra mahagaga aho. Tena mahomby ity fanafody ity. Tia izany! "
Ny fiantraikan'ny Methasterone
Ny fiantraikany be dia be dia be:
Rehefa voatazona ny dosage nomena ny Methasterone, dia mety hihena be ny fiantraikan'ny metasterone. Raha toa ny soritr'aretin'ny Methasterone dia manjary mafy, dia tsara ny mijanona amin'ny fampiasana ny zava-mahadomelina ary mikaroka fitsaboana.
Mena ho an'ny varotra
Ny zava-mahaliana dia ny hoe nahita indray i Methasterone tamin'ny fivarotana fivarotana matetika. Na dia voarara aza ny zava-mahadomelina any Etazonia dia tsy midika akory izany fa tsy afaka ny tsy hahavita izany ianao buy Methasterone. Azonao atao ny mahita ny Methasterone mivarotra an-tserasera, indrindra fa any UK sy Sina izay mbola ara-dalàna. Metasterone UK sy Shina dia azo amidy eo ambanin'ny anarana marika maromaro. Ny Metharsone dia tsy mampanahy ny vidiny satria ny vidin'ny zava-mahadomelina dia amin'ny vidiny mora indrindra raha oharina amin'ny zava-mahadomelina mitovy amin'izany.
Van Enoo, Peter & Frans T. Delbeke (2006). "Ny metabolisma sy ny fandroahana ny steroide anabolic amin'ny fanaraha-maso doping. Journal of Steroid Biochemistry and Biology of Molecular. 101: 173.
Julius A. Vida (1969). Androgana sy Anabolic agents: Chemistry sy Pharmacology. Academic Press. pp. 23 & 168.
Ringold, HJ, E. Batres, E. Necoechea (1959). "Steroids. 2-Methyl & 2-Hydroxymethylen-androstane Derivatives ". Journal of American Society Society. 427-432
Ny zavatra rehetra momba ny Trenbolone Enanthate Powder Masteron (propionate Drostanolone) Ny fiantraikany, Dosage, Side effects